‘एम्बुलेन्स त पायौं, बर्थिङ्ग सेन्टर चैं खोई ?’ – Shirish News
‘एम्बुलेन्स त पायौं, बर्थिङ्ग सेन्टर चैं खोई ?’
राजकरण महतो । बर्दिबास
बिजलपुराकी ४० बर्षीय कलावत्ति देवीले गाउँमै नयाँ एम्बुलेन्स पुग्दा दंग छिन् । एम्बुलेन्स नहुँदा भोग्नु परेको पीडाबाट मुक्ती पाइने भएपछी उनी छिमेकी कनमनिया देवी महरापनि खुशी छिन् । गाउँमा कोही अकस्मिक विरामी पर्दा गाउँलेहरु १५ किलो मिटर टाढा बर्दिबासबाट एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्ने बाध्यता थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले आपूर्ती व्यवस्था महाशाखा टेकु काठमाण्डौंले कलावत्तिको गाउँको स्वास्थ्य चौकीलाई नयाँ एम्बुलेन्स दिएको छ । बर्दिबास नगरपालिका मेयर विदुरकुमार कार्की स्वास्थ्य चौकीका व्यवस्थान समितिका अध्यक्ष श्यामप्रसाद राउतलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरे ।
बर्दिबास नगरपालिकाका मेयर विदुरकुमार कार्कीले स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्दै । तस्वीर, राजकरण महतो
एम्बुलेन्स सेवा गाउँमै पुग्दा खुशी भएकी कलावत्ति र कनमनिया गाउँमै सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छिन् । गरिव तथा विपन्नहरुलाई बर्दिबास आएर स्वास्थ्य उपचार गराउनु पर्ने बाध्यता छ ।
७ बर्ष अघि बिजलपुरा उप—स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरउन्नती गर्दै स्वास्थ्य चौकी बनाइयो । बार्थिङ्ग सेन्टर सहितको सुविधा गाउँमा संचालन गर्न स्थानीय समाजसेवी कृष्णप्रसाद पौड्ेलले एक करोंडको ५ कठ्ठा जग्गा दान गरे । त्यसमा भवन बन्न थालेको ५—६ बर्ष भयो । तीन ठेक्केदार फेरी पनि स्वाथ्य चौकीको भवन अधुरै छ ।
‘एम्बुलेन्स त हामीले पायौं,’बर्दिबास नगरपालिका मेयर विदुरकुमार कार्कीलाई प्रश्न गर्दै कलावत्तिले भनिन्,‘ मेयर ज्यु, बर्थिङ्ग सेन्टर चैं खोइ ? गाउँको बर्थिङ्ग सेन्टर कहिले संचालनमा आउँछ ?’ गाउँमा एम्बुलेन्स पाएर मात्र हाम्रो गाउँलेहरुको समस्या समाधान नभएको उनले बताइन् ।बर्थिङ्ग सेन्टर भवन निर्माणमा ढिलाई भएपछी बिजलपुराको छिमेकी गाउँ किसानगर, पशुपतिनगरका
स्थानीयलाई पनि समस्या छ ।
गर्भवत्ति महिलाहरुलाई सुतकेरी गराउन बर्दिबास सरकारी अस्पताल पठाउनु परेको विजलपुरा स्वास्थ्य चौकीका अनमी इन्दु बलम्पाकीले बताइन् ।‘व्यथामा रहेका गर्भवत्ति महिलालाई टाढाको अस्पतालमा बच्चा जन्माउनु जानु पर्दाको पीडा उनीलाई थाहा छ ।’
स्थानीय सुबोध महतोका अनुसार, जग्गादाताको कृष्णप्रसाद पौड्ेलको केही महिना अघि मृत्यु भयो । उहाँको गाउँमै सुविधा सम्पन्न हस्पिटल संचालन भएको हेर्ने सपना थियो ।त्यसैले जग्गा पनि दान गर्नुभयो । ठेक्केदारको र कर्मचारीहरुको गैरजिम्वारीले अस्पताल भवन बन्न सकेको छैन ।
बर्दिबास नगरपालिकाका मेयर कार्कीले निर्वाचित भएको एक सय दिनमा नगरपालिका भित्रको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने बताएका थिए । उनी निर्वाचित भएको ६ महिना वितिसक्दा पनि बर्दिबास नगरपालिका भित्रको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
‘नगरभित्रको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन म लागि परेको छु,’ मेयर कार्कीले भने,‘च्वाई—च्वाई घुम्ने कुर्सीमा घुम्न मलाई जनताले जिताएको होइन् । काम गर्न जनमत दिएको हो ।’ नगरभित्रको समस्या घटाउनु नै आफ्नो विकासको यात्रा रहेको उनले बताए ।
स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण सम्पन्न गरेर छिट्टो हस्तान्तरण गर्न नगरपालिकाले भवन विभागसंग माग गरेको मेयर कार्कीको भनाई छ ।
महोत्तरीमा रोकिएन टिपर आतंक, टिपरको ठक्करबाट औरही नगरपालिकामा एक बालिकाको गयो ज्यान ।
महोत्तरीकी एक युवतीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु ।
विश्व एड्स दिवसमा ए.एच.एफ. द्वारा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता
पछिल्लो ६ महिनामा नेपालमा ३१९ वटा बलात्कारका घटना, ७५ प्रतिशत घटना दुई वर्षदेखि १८ वर्ष मुनिका बालिका तथा किशोरी
जानकी मेडिकल कलेज प्रशासन र कर्मचारीबीच तीनबुँदे सहमति पश्चात दुई कर्मचारीले २८ औं दिनमा आमरण अनशन तोडे
घाईते बालकको उचारमा आर्थिक खाचो,सहयोगको याचना
पीडित महिला ‘बलात्कारी’ लाई खाना लिएर प्रहरी चौकी आउँछिन् र अभियुक्तलाई खाना खुवाएर फर्किने गर्छिन्